Bromantane (87913-26-6) hplc≥98% Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
Bromantane imishonga inonzi inokurudzira mupfungwa uye muviri. Inogona kubatsira kubvisa kuneta nekuzvidya mwoyo, kunatsiridza kudzidza, uye kubatsira nemabasa ekuita.
Kemikari Name N- (4-bromophenyl) adamantan-2-amine
muchiso Name Ladasten
Kirasi yeMishonga Atypical psychostimulant uye anxiolytic drug
Molecular Wsere 306.24g
Monoisotopic Mass 306.246 g / mol
Kunyorera Point 106-108 ° C
Boiling Point 404.8 ± 28.0 ° C pa 760 mmHg
Biological Half-Life Maawa 2.75 muvakadzi, uye maawa 4.0 ari varume.
Skukodzera Kusasvibiswa mumvura, kusvibiswa muacetone
APane Bromantane (Ladasten) mishonga inonzi inokurudzira mupfungwa uye muviri. Inogona kubatsira kubvisa kuneta nekuzvidya mwoyo, kunatsiridza kudzidza, uye kubatsira nemabasa ekuita.
Chii chinonzi Bromantane (87913-26-6)?
Bromantane yakave yakakurumbira pakati pevashandisi vakawanda vema nootropic mumakore akawanda nemasoja akawanda nevatambi vari kushandisa iyo kubvira kare 80s. Bromantane ine simba rinokurudzira uye kufunganya panguva imwe chete. Kunyange zvazvo zviitiko zviviri zvichiita sokuti hazvikanganisi zvinokonzerana, unofanirwa kuona kuti Bromantane inonyanya kuve neotropic nokuti inofara mupfungwa uye inokurudzira yose mune imwe.
Yakashandiswa kusimbisa kupora mushure mekuita basa rakaoma. Inenge iri muongororo yekuongorora kuti inogona kushandiswa mumishonga yemitambo nekuti vanhu vakawanda vakashandisa kare kare vakazivisa kuti yakanyanya kuwedzerwa mutambo wavo. Zvinonziwo kuwedzera kusvinura pamwe chete nekukurudzira kwavo uye simba rose rekufunga.
Nzira yeBromantane (87913-26-6) mabasa
Bromantane nzira yekuita inobva pane serotonergic uye dopaminergic neurotransmitter systems. Panguva ino unogona kutotanga kufungidzira kuti rinoshanda sei. Migumisiro yaro inounzwa nepfungwa yokuti Bromantane inhibits reuptake yezvose dopamine uye serotonin. Kunyange zvazvo zvisati zvichinyatsozivikanwa kuti zvinowedzera sei norepinephrine mumuviri, inofungidzirwa kuita saizvozvo. Uyezve, inofunganya zvinhu izvo Bromantane iripo ndeyekuita nenzira iyo inosimbisa GABA-ergic mediation.
Bromantane (87913-26-6) Dosage
Kutanga, tora zvishoma nezvishoma kusvikira wakaziva kuti muviri wako unopindirana sei nekushandiswa kwawo uye kuti unogona kutsungirira sei. Izvozvo zvinonzi Bromantane zvinotanga kukwikwidza kubva kune yakaderera se-10mg, uye muyero wako uchadaro, zvinoenderana nezvamunoda kuzadzikisa. Sekutanga, iwe unogona kutanga nekuitora kamwe kamwe pazuva usati wadzidza kushandisa iko kaviri zuva rega rega.
Chimwe chinhu chaunofanira kuziva ndechekuti Bromantane miyo inotarisirwa kuita zvepabonde sezvo inobata nekukurumidza muvashandi vevakadzi. Bromantane hafu yeupenyu hupfupi kwazvo kuvakadzi sekuenzaniswa nevarume. Madzimai anotora maawa mashoma 2.75 kutanga kunzwa Bromantane effect apo inotora varume varume maawa mana kuti vanzwe zvakafanana. Sezvo iine hukuru hwemapopi, ino nootropic inobatwa nokukurumidza nehutachiona hwemimba imwe yakatorwa nemuromo.
Ivhareji yeBromantane inotanga inotanga pa 50-200mg uye chero dhiyo inopfuura 300mg haina kukurudzirwa. Kazhinji vanhu vakawanda vanosarudza kutora 100-200mg zuva nezuva akaparadzaniswa kaviri pazuva kuti ataure kuti munhu anotora dhigiri ye 50-100mg mangwanani nemanheru. Kushandisa izvi kwemavhiki maviri kana mana anotevera kuchakubatsira kuona mitsva yako yakanaka.
Bromantane (87913-26-6) Makomborero
Rinoderedza kuzvidya mwoyo uye kushungurudzika
Dzimwe nguva ungangodaro uri kupera mupfungwa uye unganzwa sokunge wakasvika pakuputsa kwako. Munguva ino, unonzwa sokuti mufaro uri kure nekusvika kwako. Zvinowanzoitika, uye mashoko akanaka ndeokuti kutora Bromantane kunokubatsira kuti utsungirire manzwiro aya uye ita kuti upenyu hwako hudzoke. Zvimwe zvezvibereko zveBromantane ndezvokuti zvinokurudzira pfungwa yekuzorodza, zvinoita kuti muviri usakanganise uye unogonawo kubatsira panzvimbo yekemikari mishonga inogona kupera nekudzvinyirira. Somugumisiro, kana iwe ukatora Bromantane, hauchazovi nenguva yekusagadzikana kwekushungurudzika nekuzvidya mwoyo.
Avo vanoshandisa Bromantane vanogona kubvuma kuti zvinovabatsira kuwana humwe simba mukuita mabasa avo. Somuenzaniso, kureba kwakaratidzika kwakaoma iye zvino kunonzwa nyore nyore. Haiti kungobatsira chete marathoners asi ani naani anowedzera kuita basa. Iwe uchaziva kuti nekushandiswa kweBromantane kuwedzera, iwe zvino unokwanisa kuita zvakawanda nehuwandu hwesimba nesimba kune imwe nguva yakareba. Somugumisiro, iwe uchashamisika kuti uchakwanise kubudirira sei usinganzwi wakaneta zvakanyanya. Saka kana iwe uchida kutora kutsungirira kwako mahedheni akakwirira, kuraira Bromantane kubva kuFcoker.com kunofanira kuva chinhu chinotevera chaunofanira kuita.
Inodzorera uye inowedzera basa rekuita mupfungwa nepanyama
Mumakore ese aya, basa redu rekufunga uye rekuita rinogona kuderedza nekuda kwekwegura uye zvimwe zvinhu. Nenguva isipi, Bromantane inogona kukubatsira kuti udzorere iyo mujiffy. Nokuwedzera chiyero icho mushure mutsvina inogona kupora kubva pamabasa makuru emumuviri, basa remuviri wekushanda rinowedzera. Kana iri yekushanda kwepfungwa, iwe uchakwanisa kufunga zvakananga nekuita zvisarudzo zviri nani pasina uropi uhwo hune usimbe. Nokudaro, iwe uchagara uchinge wakagadzikana mupfungwa uye usingave nehupfungwa hwehupi zvakare.
Kamwe muviri unobereka kupisa kudarika kunosunungura, kunogona kutungamirira ku hyperthermia kana kupisa. Somugumisiro, unogona kunge uri pangozi yekutambura nehosha dzakawanda. Imwe yeBromantane zvinokonzerwa ndeyokuti inodzivirira muviri kuti uwedzere kupisa uye kuve nechisimba hyperthermia.
Pane imwe nguva muhupenyu, munhu wese akambonetseka. Kunzwa kuti kutya kana kushungurudzika kungave kusingawanzoitiki kana nguva dzose kunobata hupenyu hwehupenyu husina kunaka. Kuti usapinda mumatambudziko akadaro, unogona kusarudza kutora Bromantane.
Inokurudzira simba uye inopedza kuneta
Iwe unoziva manzwiro aunowanikwa paunenge uchangobva kubasa uye unoda kuenda kune yako yekurovedza chirongwa. Kazhinji simba rako rakawanda riri pavanenge rishoma uye kungosimudza makumbo ako kunogona kuva basa rakaoma. Kuneta hakungogumiri chete nzira yatinoshandisa nayo mabasa edu asiwo kunokanganisa kushamwaridzana kwako, hupenyu hwemhuri uye mararamiro ako kumabasa. Kunyange zvazvo vanhu vakawanda vangave vasingazivi nzira yekugadzirisa naro, kutora Bromantane ndeimwe yemhinduro dzinoshanda yekudzivisa kuneta. Kana iwe uchinzwa sokuti iwe unogona kunge uchida simba rinokurudzira zvakakwana kuti ugone kupedza iwe zuva rose zvino kutora Bromantane supplement ndicho chinhu chakanaka chaunofanira kuita. Bromantane inokupa simba rinopfuura risina kukukurudzira iwe kana iwe unonzwa sokunge wakaneta uye usimbe iri kukubata iwe.
Inovandudza nzira dzekudzidza uye kubatana kwekufamba
Apo patinotaura nezvekuvandudza nzira yekudzidza, zvinoreva kuti kukwanisa kunzwisisa zvinhu zvitsva kunowedzera. Bromantane inoita kuti uve mudzidzi anoshanda uye anoshanda. Uyewo, inovandudza musimba kufamba nekubatana, uye izvi zvinogona kuita basa rinokosha mukuvandudza mitambo yekuita.
Inokurudzira zvirwere zvemuviri
Ndiani asingadi kuva nechirwere chemasimba emuviri? Kuva nechirwere chekudzivirira muviri kunobatsira muviri wako kupindura kune utachiona nenzira yakanakisisa. Chimwe chinonakidza ndechokuti kubva pamuti wokutanga weBromantane iwe waunotora, muviri wako unogona kurwisa zvirwere nenzira iri nani kupfuura iyo yaigona kutanga. Kuzvidzivirira kwakagadziriswa kunokonzerwa nekuwedzera kwemazinga eB-seli mumuviri. Ndivo masero emachena eropa anobatsira muviri mukurwisa zvirwere. Izvozvo zvinoreva kuti nekushandiswa kweBromantane, unowana kukudzivirirwa kudzivirira zvirwere uye utachiona. Mutungamirire Bromantane kubva kwatiri nhasi uye tenderera nguva dzose kuchipatara kushanyira zvimwe!
Wakambove uri mumamiriro ezvinhu zvokuti haugoni kuyeuka chimwe chinhu chakaitika maminiti apfuura? Zvinogona kunge zvichiomesa, uye iwe unogona kuzviwana uchinetseka kuti ndeupi mushonga unogona kuvandudza izvi. Mashoko akanaka ndeokuti Bromantane inobatsira nekuchengetedza chiyeuchidzo nekuyeuka kuyeuka. Kubatsira kweizvi ndechokuti iwe unogona kugara uchiyeuka zvinhu zvaunoda. Inonyanya kusimbisa zvose zvenguva pfupi uye kwenguva refu yekuyeuchidza zvino kuwedzera kukwanisa kwako kwekuyeuka.
Tenga Bromantane kubva kuBuasas.com